Ọhụụ: Ọhụụ Nuru Africa bụ ime ka onye isi ojii / onye Africa si n'ọchịchịrị nke gbara ọchịchịrị, ndụ ya na ọdịmma ya.
Ebumnuche: Nuru Afrika ewepụtala onwe ya ebumnuche:
Agbaji agbụ na-egbochi mmepe mmadụ Black / African ;
Nwoke nweere onwe ya Black / African echiche, clichés na stereotypes nke, dika shei gbara ya gburugburu;
Etinye n’ime ndi mmadu Black / African maka mmepe zuru oke nke Africa
Gbaa mbido atụmatụ nke so na mmeghari ohuru nke Africa;
Mepụta usoro iji mee ka ihe ịtụnanya nke ndị Africa na - amaliteghachi;
Detuo akuko banyere ebube nke Africa dabere n’ezi akara ya;
Revalorize ntuziaka Africa ;
Leavehapụrụ ihe nketa nke ịdị ukwuu nye ọgbọ ọdịnala Africa;
Iji hụ na Black Race na-emetụta agbụrụ ndị ọzọ nke ụwa.
Mkpali: Nuru Afrika bụ oghere a na-ekwu okwu ma na-ekerịta okwu ndị na-achụpụ mpaghara isi awọ niile nke njem ha na-eduga n'ịdị ukwuu nke Africa.
Akara Aha: Nuru Afrịka bụ Afrịka Lumière.
Kedu ihe kpatara ndi ojii ojii / ndi Africa Mohammed jiri tuo ihe banyere ncheta ndi nna nna ha; Ndị Black / Africa Mohammedans na-eme mkpesa n'ihi na okwukwe ha nwere n'okpukpe Muslim bụ mkparị nye ndị nna nna ha
Site na: Roger Manzekelena: June 1, 2020 18: 53 Enweghị asịsa
Maka na ha amaghi ihe ndi Arab jiri mee ndi nna nna ha. Ha juputara ala ala ndi okpukpe ndi nna ochie nke Africa. Ha mejuputa alakụba ebe ndi Arab…	GỤKWUO
Ndi ojii / ndi Africa na-eche etu ha si bụrụ ndi Alakụba? Ezigbo ndị Black / African Mohammed, you na-eche ihe kpatara na otu i jiri bụrụ onye Alakụba?
Site na: Roger Manzekelena: June 1, 2020 18: 39 Enweghị asịsa
Knowmara na ndị nna nna gị bidoro ire ka ha si na mba Arab ndị Alakụba ?? Know maara na n’ihi Alakụba, ndị Arab gbaburu nna nna gị n’aha…	GỤKWUO
Inmụ nwoke n'ụdị uwe nwanyị: dị ka o kwesịrị, enwere uwe maka ụmụ nwanyị na maka ụmụ nwoke, uwe ogologo ọkpa, uwe elu na ogwe aka ọ bụ maka ụmụ nwoke - n'aka nke ọzọ, uwe, uwe elu nwanyị na uwe mwụda, ya. bụ maka ụmụ nwanyị
Site na: Roger Manzekelena: Mee 10, 2020 16: 49 Enweghị asịsa
Ebe ụmụ nwanyị bidoro iyi uwe ogologo ọkpa, enwere ike inwe ụmụ nwoke ndị na-enweghị obi ụtọ. Nke a kpatara na, na nzaghachi, ha na-eyi uwe ụmụ nwanyị…	GỤKWUO
Azụmaahịa ohu: mkpochapu adịghị abara onye ọ bụla uru, enwere ndị kwenyere na a ga-echefu mpụ metụtara ahia ohu, mana olee ndị ga-erite uru site na mkpochapụ?
Site na: Roger Manzekelena: Mee 1, 2020 18: 28 Enweghị asịsa
Ma oji ojii ma o bu ndi ocha kwesiri ichefu obi ojoo na mmebi iwu ahia ohu. N'ihi na ọ bụ mpụ megide mmadu. Ndi mmadu niile nwere…	GỤKWUO
Kedu ihe na-eme na Democratic Republic of Congo? Na Democratic Republic of Congo, usoro ihe ga na-aghọrọ ngwa ngwa; Dika obodo chere nsogbu ahu ike banyere oria Corona, onodu ochichi a adila ugbua
Site na: Roger Manzekelena: April 12, 2020 16: 18 Enweghị asịsa
Ntụkwasị obi n'etiti ndị na-eme ndọrọndọrọ ọchịchị adịworị elu n'oge Onye isi ala, Félix Tshisekedi, kwupụtara ọnọdụ ọnọdụ ahụike mberede na-esochi Covid-19. Mara na…	GỤKWUO
Ihe nzuzo zoro ezo nke ihe anọ nke ihe iriba ama a etinyebere n’elu obe nke Jisos, ihe akuko edeputara na Jisos nwuru n’elu obe na onye Pilato nke Rome nwere ihe iriba ama n’obe nke Jisos.
Site na: Roger Manzekelena: April 11, 2020 13: 50 Enweghị asịsa
Dika Akwukwo nso si di ibu akwukwo ghere oghe, obu ihe kachasi nkpa iji bulie ihe mkpuchi na obe nke obe Jesus Christ. Akwụkwọ ozi anọ nke ọ na-akọ na…	GỤKWUO